PressTV-Malaria kills 150 in Zimbabwe after heavy rains
Mon Mar 27, 2017 04:17PM [Updated: Mon Mar 27, 2017 04:35PM ]
Villagers carry food and other belongings as they walk across a puddle along a flooded foot path on March 4, 2017 heading towards Sipepa flood victims camp from Mbanyana village in Tsholotsho District, in Matabeleland North Province. (Photo by AFP)
"We have seen increased cases of malaria due to the more rains received this year that increased the breeding grounds for mosquitoes," Joseph Mberikunashe, the malaria director in the ministry of health, told AFP.
Zimbabwe doctors end three-week strike
Zimbabwe state doctors end their crippling strike after three weeks.
Zimbabwe doctors, teachers go on strike
Teachers, doctors and nurses in Zimbabwe go on strike over unpaid salaries.
Zimbabwe building resilience against drought
The government of Zimbabwe is planning projects that will save it from further impacts of the drought currently affecting the country.
State of disaster declared in Zimbabwe
Zimbabwean President Robert Mugabe declares a state of disaster as a severe drought ravages rural areas in the country.